घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू क्रिस वाइल्डर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
क्रिस वाल्डरको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेप मा, हामी तपाईंलाई उपनाम "पुरानो स्कूल मालिक" को साथ फुटबल प्रबन्धकको इतिहास दिन्छौं। LifeBogger आफ्नो शुरुआती दिनहरुबाट शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाइँलाई क्रिस वाल्डरको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
क्रिस वाल्डरको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ एक तथाकथितको साथ प्रबन्धक हुनुहुन्छ।Dinosaur'फुटबल प्रबन्धन को लागी। उहाँ एक जसले आफ्नो शेफील्ड टोली बनाएर चमत्कारहरू गर्नुभयो (£ 1m भन्दा कम लागत) २०१२/२०२० प्रिमियर लिग सत्रमा राम्रो सुरु गर्नुहोस्। जहाँसम्म, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरूले क्रिस वाल्डरको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
क्रिस वाइल्डर बचपन कहानी - परिवार पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन:
क्रिस्टोफर जोन वाइल्डरको जन्म सेप्टेम्बर १ 23 .1967 को २ XNUMX औं दिनमा स्टकसब्रिजमा भएको थियो, एउटा सानो शहर र सिभिल अफ सिटी, इ England्गल्यान्डको सिभिल पारीसमा। जे होस् शेफील्डमा जन्मिए पनि सेतो ब्रिटिश जातीयताको फुटबल प्रबन्धकको परिवारको उत्पत्ति स्टिल शहर लिभरपूलबाट भएको हो जसमा उनी एक हुन्।स्कूसर'।
एसिलेले मेटलल्याण्ड-नेइल्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
वाइल्डर आफ्ना आमाबुबा, दिदीबहिनी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँकै पालनपोषणमा ठूलो प्रभाव पार्ने काकाको साथ हुर्कनुभयो। उहाँ एक मध्यमवर्गीय परिवारका परिवारबाट आउनुहुन्छ जुन उनका बुवाले संचालित गर्नुभयो जसले लिभरपूलको श्रमजीवी क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। सानो बच्चाको रूपमा वाइल्डरका काकाले खेल मन पराउनेमा ठूलो प्रभाव पा .्यो। उसको काकाको सेटले उसलाई केवल फुटबल कसरी खेल्ने भनेर सिकाउँदैनथ्यो, तर लिभरपूल खेलहरू हेर्न एनफील्डमा लग्यो। उसको शब्दमा;
“हामी क्रिसमस र अनौठो स्कूलको बिदामा जान्थ्यौं। त्यो समय हो जब म लिभरपुलको पूर्वमा सम्पन्न उपनगरमा बस्ने आफ्ना काकाहरूसँग एन्फिल्डमा जान्थें। म उनीहरूलाई मेरो बुवा फुटबल एटम्स सहित हेर्न चाहन्छु "
क्रिस वाइल्डर शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
सत्तरको दशकको मध्यमा, लिभरपूलले ठूलो मात्रामा सफलता हासिल गर्‍यो, सबै कुरा जित्दै- यूरोपीयन कप, यूईएफए च्याम्पियन्स लिग, लिग कप, यूरोपीयन सुपर कप / यूईएफए सुपर कप आदि। क्रिस वाइल्डर अन्डफिल्डमा आफ्ना बुवा र काकाहरूसँगको केही क्षणहरू चरिरहेका थिए, जुन विकासले उसलाई फुटबलर बन्नु बाहेक अरू केहि चाहँदैन भनेर देख्यो।
स्कूलमा छँदा, वाइल्डरले सबै खेलहरू, विशेष गरी क्रिकेटको आनन्द उठाए। एक अष्टराउंडर भएता पनि, फुटबलर अझै ध्यान केन्द्रित बनेको छ। आफ्नो सपना पछ्याउन, क्रिस वाल्डरले फुटबलको अवसरको खोजीमा लिभरपुललाई आफ्नो जन्मस्थल शेफील्डमा छाडे। उनी शेक्सिल्डको स्टकसब्रिज जिल्लामा रहेको स्टकसब्रिज पार्क स्टील्स एफसीका लागि बलबहाइको रूपमा काम पाए।
पछि, वाइल्डरले एक फुटबल प्रशिक्षु र एकेडेमी खेलाडीको रूपमा साउथेम्प्टनको साथ एक सफल परीक्षण पायो। एक नम्र प्रशिक्षुको रूपमा, उनले साउथ्याम्प्टन लिजेन्ड- को फुटबल जुत्ता सफा गर्ने भूमिका लिनुभयो डेभिड आर्मस्ट्रstrong. आफ्नो सर्वश्रेष्ठ दिएर पनि, गरीब वाल्डरले वरिष्ठ फुटबलमा क्लब युवा वर्गको माध्यमबाट प्रगति गर्न सकेन। दुःखको कुरा, साउथेम्प्टनको पहिलो टीममा नबनाई उनी खराब प्रदर्शनका कारण रिहा भए।
सारांशमा क्रिस वाइल्डर फुटबल क्यारियर:
कुनै पनि युवा खेलाडी जो मार्फत आएका छन् एकेडेमी अस्वीकृति यो केवल गहिरो भावनात्मक पीडा र हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणामहरू हुन सक्छ जान्न सक्छ। साउथेम्प्टन एकेडेमी खेलाडीको रूपमा ग्रेड बनाउन असफल भएपछि, गरीब वाइल्डर आफ्नो जन्म शहर शेफिल्डमा फर्किए। धन्यबाद, शेफील्ड युनाइटेड उहाँलाई एक बचावकर्ताको रूपमा स्वीकार्यो।
रोब होल्डिंग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एक औसत खेलाडीको बावजुद, शेफिल्डले वाल्डरलाई उनको वरिष्ठ क्यारियर बनाउँन मद्दत गरे। पूर्व बल बल केटाले कुनै पनि समयमा अगस्ट १ 1986 11 मा क्लबको पहिलो टीममा आफूलाई प्रक्षेपण गरे। शेफील्डसँगको आफ्नो क्यारियरको क्रममा वाइल्डरले १ 1999 34 Hal मा हेलिफ्याक्स टाउनमा प्रवेश गर्नु अघि जम्मा ११ क्लबको साथ onण लिन आफैलाई नम्र तुल्याए, क्लब जहाँ अन्ततः झुण्डियो। उसको जुत्ता। वाइल्डर (तल चित्रमा) football XNUMX वर्षको उमेरमा फुटबलबाट रिटायर भयो।
क्रिस वाल्डरले football 34 बर्ष उमेरको फुटबलबाट अवकाश लिए।
क्रिस वाइल्डर जीवनी तथ्यहरू - फेम कथाको लागि रोड:
सेवानिवृत्त भएपछि क्रिस वाल्डरले एक औसत फुटबल खेलाडी हुँदाहुँदै पनि उसले अझ राम्रो गर्ने छ भन्ने विश्वासको साथ फुटबल व्यवस्थापनमा प्रवेश गर्न थाल्यो। उनले आफ्नो कोचिंग क्यारियर Alfreton Town को साथ बर्ष बर्षे 2001 मा शुरू गरे। उनले सोचेको अनुसार फुटबल व्यवस्थापन सकारात्मक नोटमा शुरू भयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… Alfreton को प्रभारी पछि केवल 27 हप्तामा, अंग्रेजी व्यक्तिले चार ट्राफी जित्यो।
डेभिड बेखम बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
आफ्नो प्रबन्धकीय क्यारियरको अर्को चरणमा, वाइल्डरले 300 भन्दा बढी खेलहरूको लागि ह्यालिफ्याक्सको प्रबन्ध गर्न गए जब सम्म कि एक्सएनयूएमएक्स जून एक्सएनयूएमएक्समा क्लब लिक्विडेसनमा गयो। तरलताले गर्दा उनी अक्सफोर्ड गए र पछि लीग दुई प्रतिद्वन्द्वी नर्थहेम्प्टन गए, जहाँ उनले उनीहरूलाई नेतृत्व दिए लीग दुई 99 अ with्कको साथ शीर्षक।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… क्रिस वाल्डरले नर्थहाम्प्टनमा तीन महीनाको लागि भुक्तान गरिसकेका थिए, एक विकास जसले सुपरमार्केट चेकआउटमा धेरै पटक अस्वीकार गरेको उसको कार्डको दुखद अनुभवको कारण भयो। गरीब उसलाई !!!
क्रिस वाल्डरले his महिनाको तलब पाउनुपर्दा उनको कार्ड भुक्तान अस्वीकार गरिएको थियो।
क्रिस वाइल्डर बायो - फेम टू फेम स्टोरी:
आर्थिक आँधीबेहरीको कारण क्रिस वाइल्डरको जीवन सउदी अरबका प्रिन्स अब्दुल्लाहले बचाए जसले उनलाई क्लबसँगै व्यवस्थापन लिन आमन्त्रित गरे। 12 मे 2016 मा, वाइल्डर आफ्नो बाल्यकाल क्लब शेफील्ड युनाइटेडमा सामेल भए।
थोरै आर्थिक समर्थनको साथ, वाइल्डरले नि: शुल्क स्थानान्तरण मार्फत धेरै अधिग्रहणहरू गर्‍यो। उसले आफ्नो पहिलो मिशन बनायो; "खेलाडीहरूलाई घरैमा महसुस गराउनु". यो प्राप्त गर्न को लागी, नन-बकवास प्रबन्धकले कडा लेखहरु तल फाल्यो "काममा स्वागत छ"क्लब प्रशिक्षण मैदान मा। उसको लागि, त्यहाँ राम्रो प्रेरणादायक नारा थिए र खेलाडीहरू घरमा महसुस गर्नु हो।
क्रिस वाल्डरले शेफिल्डमा सामेल भएपछि प्रशिक्षण मैदानमा प्रेरणादायक नाराहरू फालिदिए।
कमजोर पहिलो सत्रको बावजुद, वाइल्डरले क्लबलाई लिग वन च्याम्पियन बन्नको लागि निर्देशित गर्‍यो प्रक्रियामा 100 अ points्क प्राप्त गर्दै (एक क्लब रेकर्ड)। उनको सफलता च्याम्पियनशिपमा प्रवेश गरे पछि पनि जारी रह्यो। च्याम्पियनशिपमा वाइल्डरले उनको शेफील्ड युनाइटेड टीमको नेतृत्व गर्यो र क्लबमा तीन वर्षमा दोस्रो पदोन्नती जितेर शीर्ष स्थानमा प .्यो।
रियो फर्डिनान्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
आफ्नो उपलब्धिहरु को सम्मान मा, उनी 2018 / 2019 सिजन को LMA प्रबन्धक बाट सम्मानित थिए। वाइल्डर हरायो पेप Guardiola म्यानचेस्टर सिटी म्यानेजरले घरेलु ट्रेबल पूरा गरे पनि पुरस्कारलाई।
क्रिस वाल्डरले आफ्नो LMA प्रबन्धकलाई बर्षे होल्– - २०१ .–१– पुरस्कार।
उनको गृहनगर क्लब प्रिमियर लिगमा ल्याए पछि, वाइल्डरले आफ्नो टीम वरिपरि निर्माण गर्न शुरू गर्यो जोन लुन्डस्ट्रम, एक पटक एभर्टन अस्वीकार र एक फुटबल प्रतिभा उसको शहर, लिभरपूल बाट। उनका बाँकी खेलाडीहरूलाई अपरेट गर्न स्वतन्त्रता दिँदै सबैले ब्लेडको जिग्समा पूर्ण रूपमा फिट भएको देखे। लेखनको समयमा वाइल्डरको शेफिल्ड युनाइटेडले फुटबल समुदायलाई गलत प्रमाणित गरेको छ केही प्रशंसकहरूले संरक्षकको रूपमा प्रिमियर लिगको लागि धेरै आधारभूत।
लेख्ने समयमा, लिभरपूलबाट अ English्ग्रेजी प्रबन्धकलाई प्रिमियर लिगको सबैभन्दा मौलिक रणनीतिक आविष्कारकको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ। पेप Guardiola- २०१ thanks/२०२० सत्रमा ब्लेडको आश्चर्यजनक सुरुवातलाई सबै धन्यवाद। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो
क्रिस वाइल्डर पत्नी र बच्चाहरू:
क्रिस वाल्डर एक विवाहित मानिस हुन्। सुरुमा उनले आफ्नो पूर्व पत्नी रेचेल वाइल्डरसँग विवाह गरेका थिए जसको दुबै छोरीहरू थिए जो दुवै थिए। मार्था वाइल्डर र एभिए वाल्डर। बच्चाहरूलाई हुर्काउँदै उनका श्रीमान् उनको कोचिंग व्यवसायमा लागेपछि, रचेल वाइल्डरले म्यानचेस्टर र शेफिल्डमा ग्याप कपडा स्टोर व्यवस्थापन गरे।
गोरथ दक्षिणगेट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
रिपोर्टका अनुसार क्रिस वाल्डरको पूर्व पत्नी (राहेल) लाई फुटबल मनपर्दैन भन्ने कुरा पत्ता लागेको थियो, कहिलेकाहिँ यसबाट तंग आएर परिवारको घरमा धेरै घण्टा हेरिन्थ्यो। जे भए पनि, उनी पनी मात्र हेर्छिन् जब उनको श्रीमानको टीम जीत हुँदै छ। क्रिस वाइल्डरका छोरीहरूमध्ये यो मात्र हो मार्था कसलाई खेल मन पर्छ। एभिए वाइल्डर फेसनमा छ।
उनीहरूको अविभावकको बिहेको धेरै बर्ष पछि मार्था र एभिए दुबै आमा र बुबाबीचको सम्बन्ध घट्न थाल्यो। कुराहरु अलग हुन थाल्छन् र यो यति खट्टा भयो किa'सम्बन्धविच्छेद' पुरानो जोडी को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प को रूप मा देखिएको थियो।
क्रिस वाल्डरले सम्बन्ध विच्छेद पछि गए। केही समय पछि, उसले फ्रान्सेस्का भन्ने महिलालाई भेट्यो जसलाई उनले उनीहरूको भेटलाई वर्णन गरे 'प्रेम 'पहिलो दृष्टिमा'। क्रिस र फ्रान्सेस्का दुवैले 2017 (जनवरी 31 को 2017st) को ट्रान्सफर डेडलाइन डेमा विवाह गरे। एक फुटबल प्रबन्धक विवाह गर्न को लागी कस्तो दिन !!
क्रिस वाइल्डर व्यक्तिगत जीवन:
बाहिर फुटबल उहाँलाई चिन्न तपाईं फुटबल पिच मा आफ्नो गतिविधिहरु को देखि उसको व्यक्तित्व को एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गरेर, वाइल्डर एक इमान्दार मानिस हो जसले मानिसहरूलाई उसको हेरविचारमा राख्ने एक पेशेवर र खुशीको साथ गर्ने तरीका प्रयोग गर्छ। ऊ स्वतन्त्रतामा यति धेरै विश्वास गर्दछ र आफ्नो सरलतालाई हल्कासित लिइन्छ भने यसलाई लिने छैन। उदाहरण को लागी, यदि तपाईले केहि गर्नु भयो जसले उसलाई खुशी पार्छ, ऊ खुसी छ तिमीलाई बताउन ऊ खुसी हुनेछ। यदि तपाईले केहि गर्नुभयो जसले उसलाई खुशी पार्दैन, उसले तुरून्तै तपाईंलाई सूचित गरिदिन्छ, कहिलेकाँही तपाई जस्तो तल ओर्लदै आयो ईंटहरूको टन। आलस्य सहन नहुने व्यक्तिको रूपमा आफ्नो व्यक्तित्वको बारेमा बोल्दै, उनले एक पटक भनेका थिए कि 'वेटरहरू केवल रेस्टुरेन्टहरूको लागि हो र खेलाडीहरूको लागि होईन जुन उनीहरूको प्रतिभा बुझ्दैनन्।.
बियर र वाइनका लागि उनको प्रेम: सामाजिक दृष्टिकोणबाट आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा छलफल गर्दै, क्रिस वाइल्डरलाई धेरैले वर्णन गरेका छन् जो नियमित रूपमा सामाजिक रूपमा (विशेष गरी) पबबाट पुरानो साथीहरूसँग जहाँ उनी प्राय: जसो आफ्नो मनपर्ने बियर छोडेको भेटिन्छ।
फुटबलबाट टाढा क्रिस वाइल्डर निजी जीवनलाई चिन्ने।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनका कोचिंग स्टाफ र पुराना खेलाडीहरू साथ बियर र वाइन को एक जोडी सबै भन्दा ठूलो जीत पछि सधैं राम्रो तल जान्छ।
क्रिस वाइल्डर पारिवारिक जीवन:
क्रिस वाल्डरको परिवार लेख्ने क्रममा इक्जेल रोड, शेफिल्ट, दक्षिण यर्कशायर, इ England्ग्ल्यान्डको सडकमा बस्दछन्। लेख्ने समयमा उनले सबै परिवारका सदस्यले सार्वजनिक मान्यता नलिने सचेत प्रयास गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेका छन्।
पारिवारिक सम्बन्धको कारण, उनको पूरै विस्तारित परिवार रमाईलो हुन्छ जब फुटबलले उसलाई मर्सीसाइडमा लिभरपूल वा एभरटन बिरूद्ध खेल्न लैजान्छ। यो किनभने शेफिल्ड युनाइटेड बॉसले ती पलहरू लिभरपुलमा उसको परिवारसँग पुन: कनेक्ट गर्न प्रयोग गर्थे। उनको टोलीले कि त एभर्टन वा लिभरपूल खेल्दा पनि, वाइल्डरले आफुलाई विरोध गर्ने कसैलाई मिल्छ किन्न भनेर टिकट किनिरहेको भेट्टाउँछन् जसलाई परिवार भनिन्छ। तसर्थ, उसको पारिवारिक पक्षको विरुद्ध खेल्दा गहिरो व्यक्तिगत छ किनकि उसको बुवा लिभरपुल र उनका परिवारका अधिकांश सदस्यहरू या त लिभरपुल वा एभर्टन प्रशंसक हुन्।
अर्को तर्फ, शेफिल्ड प्रशंसकहरू अझै पनि वाइल्डरलाई उनीहरूको आफ्नै हो भनेर दावी गर्दछन् किनकि उहाँ उनीहरूको शहरमा हुर्कनुभयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… वाइल्डर अक्सर 'को मन्त्रको साथ serenade छउहाँ हाम्रो आफ्नै हुनुहुन्छ'उनको प्यारो ब्रामेल लेनमा। यो किनभने शेफिल्ड प्रशंसकहरु उनीहरुलाई माया गर्छन् र विश्वास गर्छन् उनी पनि परिवार छन्।
क्रिस वाल्डर जीवनशैली:
प्रबन्धकको हैसियतमा सभ्य तलब पाउँदा पनि क्रिस वाल्डर विनम्र जीवनशैली बिताउँछन्। उसको ज्याला किन्न सक्ने फ्ल्याश कारहरू प्रयोग गर्नुको सट्टा उनी सार्वजनिक यातायातको आधारमा बसहरू शेफिलको वरिपरि यात्रा गर्थे।
रिपोर्टका अनुसार वाइल्डर अझै पनी कहिलेकाँही आफ्नो घर नजिकै एक्सेल रोड बस स्टप प्रयोग गर्दछ, जुन यो संकेत हो जुन उनको पृथ्वी प्रकृतिमा देखिन्छ। निस्सन्देह, उहाँ महँगो जीवनको लागि औषधी हुनुहुन्छ।
क्रिस वाइल्डर अनटाल्ड तथ्यहरू:
उहाँ एक पटक सरको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो एलेक्स फर्गसन: तपाईंलाई थाँहा थियो?… क्रिस वाल्डरले आफ्नो शुरुआती प्रबन्धन कालको दौडान म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व पूर्व मालिकका विद्यार्थी थिए सर एलेक्स फर्ग्युसन।
क्रिस वाल्डर र एलेक्स फर्ग्युसन- उनका शिक्षक।
अल्फ्रेटोन टाउन र अक्सफोर्डमा उनको समयमा, वाइल्डर प्रायः मन्चेस्टरको लागि मन्चेस्टरको लागि यात्रा गर्ने मानदण्डको लागि लेजेन्डरी प्रबन्धकलाई भेट्न। अनुभवको बारेमा कुरा गर्दै, उनले एक पटक आफ्ना शब्दहरूमा भने;
“उनले मलाई बाटोमा मद्दत गर्न समय निकाले। उनले केहि युवा ब्रिटिश प्रबन्धकहरूलाई गरे, मलाई मात्र होइन। त्यस्तो चीजले मलाई ठूलो बढावा दियो।
मेरो प्रमोशन प्ले अफ अफ फाइनलभन्दा पहिले उनले रातमा एकपटक फोन गरे [सन् २०१० मा योर्कको बिरूद्ध] र दुई सुझाव दिए जुन मलाई जित्न सहयोग पुर्‍यायो। ”
धर्म: क्रिस वाइल्डर जस्तै धेरै लिभरपूल परिवारहरू इसाई परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यद्यपि धर्ममा उनीसँग लगावको कुनै थोरै वा संकेतहरू छैनन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो क्रिस वाइल्डर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
शेफील्ड युनाइटेड फुटबल डायरी
हरि मग्युयर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य